Fampitaovana ny Barea: najanon’ny federasion’ny kitra ny marika « Cercle by ted » | NewsMada
Fampitaovana ny Barea: najanon’ny federasion’ny kitra ny marika « Cercle by ted »
Par Taratra sur 25/05/2020
Nivory tsy ara-potoana ny eo anivon’ny komity mpanatanteraky (CE) ny Federasion’ny baolina kitra (FMF), omaly tetsy Isoraka. « Marobe ny fanehoan-kevitra nataon’ny mpanohana sy mpankafy any anaty tambajotra any… Nivory izahay ka naka fanapahan-kevitra fa hajanona aloha ny momba io fanamiana ho an’ny mpilalaon’ny Barea sy ny vahoaka malagasy io », hoy ny filoha lefitry faharoa ny FMF, Andriamanampisoa Alfred. Nanteriny fa ezahina mba ho ny hevitry ny federasiona manontolo no hiaraka haka fanapahan-kevitra ka ho hita eo ny ho tohiny. « Aleo mba hanana fitaovana sy fanamiana tsara ny Barea sy isika mba tsy hisy ny fahadisoam-panantenana », hoy ihany izy.
Efa notsipahin’i Abel Anicet
Momba ny fahabangan-toeran’ny filoha mitantana kosa, nambarany fa miezaka mifandamina, araka ny sata sy ny lalàna izy ireo. Eo rahateo ny fampandehanan-draharaha ary mandroso ny asa. « Hojerena amin’ny fotoana mahamety azy ny hisolo ny toeran’ny filohan’ny federasiona », hoy izy. Isaky ny talata voalohan’ny volana ny fivoriana ara-potoan’ny FMF. Miisa valo amin’ireo mpikamban’ny CE miisa 11 no niatrika izao fihaonana tsy ara-potoana izao.
Tsiahivina fa anisan’ny nitsipaka an’io orinasa mpamokatra fitaovana “Cercle by ted » io ny kapitenin’ny Barea, i Abel Anicet. « Mahatsapa izahay fa mba efa ekipa lehibe eto Afrika ny Barea koa mangataka izahay mba ho mendrika ihany koa ny fampitaovana omena anay. Aleo misafidy sy hanao fifanarahana amin’ireo marika lehibe fa tsy handeha amin’ny hazo tsy fantatra », hoy izy, ny volana avrily teo.